151 ireo manaraka fitsaboana : 16 ny fari-piadidiam-pahasalamana misy pesta | NewsMada
151 ireo manaraka fitsaboana : 16 ny fari-piadidiam-pahasalamana misy pesta
Amin’izao fotoana izao, 16 ny fari-piadidiam-pahasalamana mbola ahitana ny valanaretina pesta, manerana ny Nosy raha efa nidina ho 11 izany ny 25 oktobra lasa teo.
« Distrika efa tsy nahitana trangana pesta tao anatin’ny herinandro ireo nefa niverenan’ny valanaretina indray noho ny tsy fitandremana », hoy ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana, ny dokotera Rakotoarivony Manitra, omaly, teny Tsaralalàna. 22 ny fari-piadidiam-pahasalamana efa tsy nahitana tranga intsony tao anatin’ny herinandro ka azo ambara fa mifarana ny aretina pesta ao aminy. Na izany aza, miova isan’andro ny antontanisa mivoaka arakaraka ny zava-misy manoloana ny trangana pesta. « Tao anatin’ny hateloana, nanomboka ny 24 oktobra ka hatramin’ny omaly, nihena ny isan’ny marary naiditra hopitaly. Raha 39 ny marary vaovao notsaboina eny amin’ny hopitaly, nidina 12 ny isa ny alarobia ary 12 sisa izany omaly », araka ny fanazavan’ny tale misahana ny fanaraha-maso ny valanaretina, ny dokotera Ratsitoharina Mahery. Toy izany koa ny manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly, 151 ireo mahazo ny fikarakarana manerana ny Nosy.
Nandefa filazana ho an’ny fari-piadidiam-pahasalamana sy ny CSB ny minisitra mba ho mailo hatrany manoloana ny valanaretina pesta mba tsy hiverina intsony izany rehefa fantatra fa tsy nisehoana tranga vaovao tao anatin’ny herinandro ilay distrika.
1500 ny tranga niseho manerana ny Nosy, 900 mahery ireo efa sitrana. 45 ny distrika mbola misy pesta. Araka ny antontanisa, nisy olona maty iray teny amin’ny hopitaly ivelan’Antananarivo. Nisy maty iray hafa teny anivon’ny fokontany. 126 ny namoy ny aina nanomboka ny volana aogositra hatramin’ny omaly.
Momba ny fanampiana any ivelany, 2 876 baoritra avy any Maraoka ahitana fanafody, fitaovana. Misy koa ny tohana mivantana eny amin’ny BNGRC. Omena ny mpiray ombon’antoka teknika sy amin’ny vola ny lisitry ny fanafody sy fitaovana ilaina ka izy ireo no manome izany fa tsy misy ny lelavola mivantana.